Minisiteran'ny Fahasalamana Anguilla: fepetra noraisina nidina tany amin'ny COVID-19 mialoha
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Minisiteran'ny Fahasalamana Anguilla: fepetra noraisina nidina tany amin'ny COVID-19 mialoha
Ekipa iray avy ao amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana Anguilla, notarihan'ny Lehiben'ny mpitsabo Dr. Aisha Andrewin, dia nanao fampandrenesana feno ho an'ireo mpiantsehatra amin'ny sehatry ny fizahantany momba ny Covid-19 (Novel Coronavirus) sy ny fepetra napetraka mba hiarovana ny fahasalaman'ny mponina sy ny mpitsidika. mponina ao amin'ny Birao mpizahatany any Anguilla Birao Foibe.
Tsy mbola nisy tranga nampiahiahy na voamarina voalaza fa eto Anguilla hatreto. Ny atahorana an'i Anguilla eo noho eo dia ny trangan'aretina avy any ivelany - na amin'ny alàlan'ny mpitsidika na ny mponina miverina avy any amin'ny faritra izay niparitahan'ny virus betsaka. Ny Minisitera dia nametraka fombafomba maromaro hamantarana, hifehezana ary hampiatoana ny fampitana lavitra.
Anguilla dia mampiasa ny torolàlana an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) amin'ny kaonty fitantanana azy ireo amin'ny tranga ahiahiana.
Anguilla dia manana tamba-jotra laboratoara miorina amin'ny Caribbean Public Health Agency (CARPHA), izay manana ny laboratoara rezionaly tokana voamarina mba hizaha toetra ny aretina coronavirus (COVID-19). Ny laboratoara ataon'izy ireo dia feno fitaovana ary vonona ny hitsapa santionany amin'ireo tranga ahiahiana ho COVID-19.
Ny fitsapana dia manaraka ny torolàlana momba ny OMS ary tena mitovy amin'ny fitsapana natao ho an'ny gripa sy ny otrikaretina taovam-pisefoana hafa. Ny laboratoara sy ny santionany dia alefa any amin'ny CARPHA toy ny fomba mahazatra arahin'ny dengue, gripa, hépatite, sns.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana koa dia mahazo torolàlana sy fanohanana avy amin'ny Public Health England ary nanangona ekipan'ny Health Health an'ny Anguilla (HAA) Rapid Response Team.
Anguilla dia manana faritra mitokana ao amin'ny hopitaly hiatrehana ireo tranga ahiahiana ary ny fanatsarana fotodrafitrasa fanampiny dia vitaina amin'ity herinandro ity. Mandeha ny drafitra ho an'ny vondrona mitoka-monina kely amin'ny salantsalany na maharitra.
Ny fepetra fitiliana dia napetraka amin'ny Seranan-tsambo fidirana rehetra, mba hamaritana ny tantaram-pitaterana mankany Shina tamin'ny tranga voalohany ary avy eo nitarina tany Italia, Iran, Korea Selatan ary Japon; Ny mpitsabo mpanampy amin'ny fahasalamam-bahoaka dia napetraka ao amin'ny Blowing Point hanampy amin'ny fizahana ny mpandeha.
Hatreto dia mbola tsy nisy fandrarana ny fitsangatsanganana, saingy misy kosa ireo torohevitra momba ny dia ho an'i Italia, Iran, Korea atsimo, Japon ary ny Tanibe China. Midika izany fa ny olona izay efa nitsidika ny iray tamin'ireo firenena dimy tao anatin'ny 14 andro lasa dia iharan'ny quarantine amin'ny toerana ekena hatramin'ny 14 andro.
Ny Minisitera koa dia manao fampielezan-kevitra amin'ny fomba mahery vaika sy fanitarana ny fidiovana ara-pisefoana ho fisorohana / fifehezana lehibe miaraka amin'ny fifantohana stratejika amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny ankizy ankoatry ny sarambabem-bahoaka, mampiasa radio, jingles ary PSA ary media sosialy.
Nasongadin'ny Ministera fa na inona na inona fivoaran'ny toe-javatra misy ankehitriny, ireto fitsipika fototra manaraka ireto dia mampihena ny loza ateraky ny aretin'ny taovam-pisefoana marobe ao anatin'izany ny coronavirus:
Fanasana matetika matetika indrindra aorian'ny fifandraisana amin'ireo olona marary sy ny tontolo iainany
Mandrakotra kohaka sy mievina amin'ny tavy na akanjo azo ariana ary
Fisorohana ny fifandraisana akaiky amin'ireo olona voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana
Raha mila fampahalalana bebe kokoa sy fanavaozana dia tsidiho ny tranokala ofisialin'ny Center for Disease Control (CDC), World Health Organization (WHO) ary CARPHA:
Raha mila fanazavana momba an'i Anguilla dia tsidiho azafady ny pejy Facebook'ny Ministeran'ny Fahasalamana ao amin'ny
Fepetra fitsangatsanganana any Italia izao manerana ny firenena